ညီလင်းသစ်: ကျွန်းကလေးရဲ့ ရင်ခွင်မှာ (၄)
Posted by ညီလင်းသစ် au 3.4.13
ယေးး တောင့်တလိုက်တာ ကိုယ်ထင်ပြလာပီ
စိတ်ဆိုးပြေသွားပြီ။ Dedicated ပုံလေးအတွက် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။ :)) Southern Most Point လို့ရေးထားတဲ့ နေရာလေးရော မှတ်တမ်းမတင်ခဲ့ဘူးလား အစ်ကို?
ဆွစ်တောင်တန်းတွေပေါ် တစ်ကျွန်းစာလောက် မြေဝယ်ပေးရမှာစိုးလို့ ကျွန်းလေးပြန်ပေါ်လာပြီ
ရေ မမြုပ်တော့ဘူး :P
ဟီးးဟီးး အဲလောက် အဲလောက်း))))
Thanks for sharing.. Really love the pictures. I also miss the food from ပင်နီဆူလာ. :) Waiting for your next post..
အော် သူလုပ်ပြန်ပြီပေါ.လေ။ ချဉ်ပေါင်ကြော် အနီးကပ်ပုံ
ခြေထောက် အဲလေ မျက်လုံးတောင် အတော်ညောင်းသွား၏ (နောက်တာပါ)နောက်ထပ် ဘယ်ဆက်လိုက်ရမလဲ မျှော်နေပါမယ်နော။
ပုံလေးအတွက်ကျေးဇူးပါ ကိုညီလင်းသစ်ရေ။ ပုံတွေက ကောင်းလွန်းလို့ ကြည့်ရတာ ဘယ်လိုသဘောကျမှန်းမသိဘူး။ စလုံး အဲလောက် လှသလားလို့ ကွကိုယ်ပြန်မေးနမိတယ်း))) ရိုက်တဲ့သူတော်လို့ပါ နော်...း)
အားပါး ဓာတ်ပုံတွေက ကောင်းမှကောင်း...ချဉ်ပေါင်ကြော်ကို အနီးကပ် ရိုက်ထားတာ ဂလု..ဂလု...ဟန်ဒါဆန်ဝေ့စ်တံတားဖက် ရောက်လား ကိုညီ...
လောလောဆယ်ဖုန်းနဲ့ဆွဲကြည့်နေလို့ ပုံတွေတပုံမှမပေါ်ဘူး…ခုတော့ မျက်မမြင်တစ်ယောက်စာအုပ်ဖတ်နေတာနဲ့တူနေတယ် နက်ဖြန်ရုံးရောက်မှ အားပါးတရပြန်ကြည့်ဦးမယ် အစ်ကို….( သြော် ကျွန်းကလေးမြှုပ်သွားတဲ့အကြောင်းကို ဧပရယ်ဖူးလ်မှန်းလုံးဝမစဉ်းစားမိဘူး အဲလို အဲလိုတော်တာ)
All the photos are awesome..Ko Nyi Lynn..
Chin Paung kyaw from "Ya Nant Thit" is also my favourite :)
Nyi Ma War So
အကိုApril Fool လုပ်တယ်ဆိုတာ
စီအိုင်အေ ပစ်ပစ်က စောကထဲက
ဖတ်ပြီး အေးဆေးဘဲ အိမ်ပြန်သွားတာ... :P
ကျနော်လည်း ညီနဲ့ကျမှ တစ်မိသားစုလုံးကို စိတ်ပူအောင် လုပ်တဲ့သူ ဖြစ်လိုဖြစ်၊ ဇော်ဂျီ ဖြစ်လိုဖြစ်၊ ကိုယ်ပျောက်ဝိဇ္ဇာ ဖြစ်လိုဖြစ်နဲ့...၊ ဟုတ်တော့ နေပါပြီ၊း)
အဲ.. အဲဒီနေရာလေးကို မှတ်တမ်းတင်ဖို့ မေ့နေခဲ့တာ..၊ အခု ပို့စ်တွေ ပြန်ရေးမှပဲ အဲဒီလိုမျိုး တစ်ပုံလောက် ရိုက်ခဲ့ရမှာလို့ သတိရတော့တယ်..၊း))
မြေဝယ်ပေးရတာက အကြောင်း မဟုတ်ပါဘူး၊ တော်ကြာ အာဂန္တု ကျွန်းသားတွေ တဖွဲဖွဲ ကျနေတဲ့ နှင်းတွေအောက်မှာ ပင်နီဆူလာကို လွမ်းနေမှာစိုးလို့....၊း)
ဘယ်နေရာတွေကို မရောက်သေးဘူးလဲ? သိချင်တာကို မေးလိုက်စမ်းဘာ...၊း)
Ah.. you are alsoafan of Peninsula's food. :) Thanks for your appreciation, too.
သြော်.. ကြုံတုန်းလေး အမှတ်တရ ပါဗျာ...၊း)
အဟဲ.. ညောင်းရမယ်လေ၊ ၂၃ ပုံတောင် တင်ထားတာကိုး...၊း) ပုံမှန် လာလည်တဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးပါနော်...၊
အာ.. အစ်မချစ်ကတော့ လုပ်ပြီ..၊ ဒီလိုပဲ မြေစမ်းခရမ်းပျိုး စိတ်ကူးတည့်ရာ ရိုက်ကြည့်နေတာ ပါပဲ အစ်မရာ..၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အားပေးတာ ကျေးဇူး...၊း)
အဲ.. မရောက်ခဲ့ဘူး ထင်တယ်ဗျ၊ စဉ်းစားကြည့်တာတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး....၊း)
မျက်မမြင်တစ်ယောက် စာအုပ်ဖတ်တဲ့ ဥပမာကိုတော့ သဘောကျသွားပြီ၊း) သြော်.. ကျနော်က ညီမ သိသိကြီးနဲ့ ဧပရယ်ဖူးလ် ပြန်လုပ်ပြီး အတည်ကြီး ရေးသွားတာ အောက်မေ့လို့...၊း)
Nyima War So...
I see. That Chin Paung Kyaw is really tasty, isn't it? :) Thanks for your visit, sis!
သြော်.. ဒါ့ကြောင့်လည်း စီအိုင်အေပစ်ပစ်လို့ ကျော်ကြားပေတာကိုး...၊း)
မနေ့ညနေ ရုံးဆင်းခါနီး ပို့စ်အသစ်တွေ့လို့ ကမန်းကတန်း ၀င်ဖတ်လိုက်ရတာ အားမရတာနဲ့ နောက်တစ်ကြိမ် သေသေချာချာ လာဖတ်တာ။း) သွေးကြီးနေတဲ့ နေရာတကာ မြင်နေရတဲ့ သင်္ဘောကြီးကို ကိုယ့်နည်းကိုယ်ဟန်နဲ့ ဘောင်ခတ်ပစ်လိုက်တာဆိုတာကို အရမ်းသဘောကျနေမိတာ။ ဘောင်မှာထိုးထားတဲ့ လေဘယ်လ်လေးကိုရောပဲ။း)) စင်္ကာပူကို ကိုယ်စားပြုတယ်တဲ့ဆိုတဲ့ ပုံလေးကိုလည်း ကြိုက်တယ်။
မနေ့ညက ဖုန်းနဲ့ အရင်ဖတ်ဖြစ်တယ်.
မမိုးငွေ့ ပြောသလို ပုံတွေတော့ မမြင်ရဘူး..။
ဒီနေ့ ရုံးကိုရောက်တော့မှ ချက်ချင်းဖွင့်ကြည့်တာ...။
ရေတံခွန်ရှိတဲ့နေရာလေးနဲ့ ပန်းပင်လေးတွေ ရှိတဲ့နေရာလေး တော်တော်သဘောကျတယ်..။
ပုံလေးတွေကို ဒီအတိုင်းကြည့်ရင် လှတယ်ဆိုတာပဲ ခံစားမိမှာပေမယ့် အကိုက ဖတ်ချင်စဖွယ်အရေးအသားလေးတွေနဲ့ တွဲထားတော့ အဲ့နေရာကလေးတွေ ဖတ်သူပါ ကိုယ်တိုင်ရောက်သွားသလိုမျိုးခံစားရတယ်..။
အကို့နိုင်ငံမှာ မြန်မာထမင်းဟင်း မရဘူးလား မသိဘူး..။
အကို လွမ်းနေမှာပဲ..ချဉ်ပေါင်ကြော်ကြိုက်တာချင်းတော့ တူသဗျာ...။
ဒါနဲ့ ဟင်းတွေက ဆီတွေတော့ များသား...မြန်မာဆိုင်တွေက ဘယ်နိုင်ငံမှာ ဖွင့်ဖွင့် ဆီများတတ်တယ်နော်...။
အကိုပြောတဲ့ Art of display ဆိုတာကို ပင်လယ်ခူတွေကို မြင်လိုက်တာနဲ့ ဟုတ်တယ်..ဟုတ်တယ် လို့ ထောက်ခံမိရက်သားဖြစ်သွားတယ်..။
ညီမလေးဇွန် ညွှန်းတဲ့ ကျွန်းပိစိလေးကလည်း ချစ်စရာ :)။
Songs of the sea ကိုကြည့်ရင်း ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာ ရေပန်းကြီးတွေ သွား သွားကြည့်မိတဲ့ ညတွေကို ပြန်သတိရလာတယ်...။
နောက်တစ်ပိုင်းကို ဆက်လိုက်ခဲ့ပါပြီ အကို....။
(ပြီးခဲ့တဲ့ ပို့စ်မှာ အရူးလုပ်ခံရတာအတွက် ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ပျော်ရွှင်ခဲ့ပါရဲ့ဗျာ.... :))) )
စကာင်္ပူကို ကိုယ်တိုင်ရောက်သွားသလိုပဲ ခံစားရတယ်။ ပုံတွေက အရောင်အသွေးရော၊ ကင်မရာ ရှုထောင့်တွေရော ကောင်းလိုက်တာ..။ မိုးရွာလို့ ပုံတွေ မရိုက်လိုက်ရတဲ့နေရာရောက်တော့ ကိုညီတစ်ယောက် မချင့်မရဲဖြစ်နေမှာ တွေးမိပါတယ်။ ကြိုးတံတားပုံလေးရယ်၊ ခြသေံင့်္ပုံရယ်၊ အနီရောင်ပိန်းပန်းပုံလေးရယ်၊ ကင်မရာယူထားတာ အကြိုက်ဆုံးပဲ..။ နောက်တစ်ပိုင်းမှာရော ဘယ်လိုပုံတွေနဲ့များ ဖမ်းစားထားဦးလေမလဲ..။ စိတ်ဝင်စားစွာ.. နှစ်သက်စွာ စောင့်နေပါ့မယ် ကိုညီရေ..။
ချောမေတုို့ ကနောကြေနေပြီ။ ဒီလိုအရူးလုပ်လို့ ဘယ်ရမလဲ။
Asia's largest aquarium museum is not 'Underwater world'. The largest is S.E.A Aquarium ( Marine life park), also situated in Sentosa, near Universal studio. It was opened in Dec'12.
thnx4sharing pix...
လျှောက်လမ်း2ခု က ဆက်ထားတဲ့အောက်တည့်တည့်ကရိုက်ရင်အသဲပုံလေးထွက်တယ်..အဲ့ဒါကိုအသိမပေးမိလိုက်ဖူး....
ဓာတ်ပုံတွေက သေချာရိုက်ထားမှန်းသိသာတယ် ညီကတော့ ကင်မရာချိန်လိုက်တာ ခြေလက်အစုံ ကင်မရာထဲဝင်တယ်ဆိုရင် ရိုက်လိုက်တာပဲ နောက်မှ ခြေပြတ်ခေါင်းပြတ် ဖြစ်နေ၇င်တော့မသိး)
ကိုညိမ်းနိုင်က တော်တော် သဘောကောင်းတဲ့ လူကြီးဗျ ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် ။ လေပေးလည်းဖြောင့်တယ် ။
ဆိုတဲ့ အပိုဒ်လေးဖတ်ပြီး သဘောကျလိုက်တာ။
ခဲ့တဲ့ ရှုခင်းတွေမှ ဟုတ်ပါလေစရယ်လို့ ကိုယ့်ဘာသာ
စင်င်္ကာပူ မိုးကို သွားမစမ်းနဲ့လေ ဓါတ်ပုံတွေ လှလိုက်တာနော် တော်ပါသေးရဲ့ ကျွန်းကလေးပြန်ပေါ်လို့ 
ဒုတိယအကြိမ် လာဖတ်တဲ့အတွက် ဒုတိယမ္ပိ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊း) ဟို မိုးပျံသင်္ဘောကြီးက လှလွန်းလို့ ပန်းချီကားလေး တစ်ချပ်လို ပိုလှသွားအောင် ဘောင်ခတ်လိုက်တာပါလေ...၊း))
ကျနော်နေတဲ့ နေရာမှာလည်း ထမင်း၊ ဟင်း ရပါတယ်၊ အင်း.. ကျနော့်ပုံစံက ထမင်းသိပ်ငတ်နေတဲ့ ပုံများ ပေါက်နေပြီလားပဲ..၊း) မြန်မာဟင်းတွေက အများအားဖြင့် ဆီများတတ်တာတော့ မှန်ပါတယ်၊ ဆီကိုရေချိုး၊ ဆေးရိုးမီးလှုံ ခဲ့တဲ့ လူမျိုးကွ-လို့များ ပြောချင်သလားပဲ၊းP ညီမသူသူရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း တစ်ချက်ချင်းစီကို အသေးစိတ် မှတ်ချက်ပေးခဲ့လို့လည်း ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်ဗျာ...၊
ကျွန်းကလေးရဲ့ ခရီးစဉ်ကို အထူးပဲ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ လိုက်လည်တာ တွေ့ရလို့ ကျေးဇူးပါ အစ်မရေ၊ ပုံလေးတွေကို နှစ်သက်တယ် ဆိုလို့လည်း ဝမ်းသာရပါတယ်...၊း)
နောကြေနေတဲ့ ချောမေကို ပြောမလေ...၊ အမောပြေ ကွန်မန့်လေးအတွက် မနောမြေမှာ မျောနေ ခဲ့ရပြီလို့...၊းP
Hmm...I think I must have confused all those superlative adjectives, abusively used to describe the products of our days. :) Anyhow, thank you for your correction!
thnx4leaving it... :)
အဟမ်း.. ကျနော့်ကို အသည်းပုံလေးအကြောင်း အသိပေးချင်နေတာ ဘယ်သူများပါလိမ့်...?းD
ကိုညိမ်းနိုင်က သဘောကောင်းတာ မှန်ပေမယ့် ̔လူကြီး̕ တော့ မဟုတ်သေးပါဘူးဗျာ၊ လူငယ်လေး တစ်ဦးပဲ ရှိပါသေးတယ်ဗျ...၊း)
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ ချဉ်ပေါင်ကို ကြိုက်မိလို့ “ချစ်သောချဉ်ပေါင်” လို့ ရေးရတာ အဆင်ပြေသွားတာ၊ ဂျူးမြစ်ကိုများ ကြိုက်မိရင်တော့ “အို..ဂျစ်သော ဂျူး” လို့များ ရေးမိမလား မသိ...၊း))
အာ.. ကိုညိမ်းကတော့ လုပ်ပြီ၊ အဲဒီပုံလေးလည်း ကောင်းပါတယ်ဗျ၊ ကိုညိမ်း အဲဒီလို သတိတရနဲ့ ရိုက်ခဲ့လို့သာ ဒီပို့စ်လေးရဲ့ အဆုံးမှာ အခုလို ထည့်လိုက်နိုင်တာ..၊ မဟုတ်ရင် ဒီလိုပဲ တုံးတိကြီးနဲ့ အဆုံးသတ်ရမှာဗျ...၊း)
မစမ်းတော့ပါဘူးဗျာ၊ စင်္ကာပူ မိုးအကြောင်း တွေးမိရင် လွတ်သွားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ သတိရပြီး မျက်ဝန်းထဲမှာ မိုးရွာပြီညို ဖြစ်ချင်ချင်ဗျ...၊း)
ဝှူး ... ဟထိုး “ှ” လေး ပါအောင် ရေးခဲ့လို့ တော်သေးတာပေါ့ အစ်မရယ်...၊ နို့မို့ဆို စိတ်မကောင်းစရာတွေ ဖြစ်နေတော့မှာ...။းD
ပြန်စာလာဖတ်တာ..အကို ပြန်ထားတဲ့ စာတွေဖတ်ပြီး အသံထွက်ရယ်မိတယ်..။
သမီး အကို စိတ်လက်ပေါ့ပါးနေတယ်..။
ကွန်နက်ရှင် ကောင်းတုန်း အပြေးအလွှားဖတ်၊ အပြေးအလွှား မန့်ခဲ့တယ် ကိုညီလင်းရေ ...
စင်္ကာပူကို မရောက်ဖူးသေးတာမို့ ကိုညီလင်း ပို့စ်ကို ဖတ်လိုက်ရတာ ရောက်သွားသလိုပါပဲ။
ပိုက်ဆံ အကုန်အကျ သက်သာ အချိန်ကုန်သက်သာစေတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုညီလင်းရေ ... ။
သွားလည်စရာ မလိုတော့ဘူး :D
Thanksalot for your nice photos and supporting words.
ပုံလေးတွေက လှပအသက်ဝင်နေလေတော့ အစ်ကို့ရဲ့အသေးစိတ်ကျလှသော စာနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ ကိုယ်တိုင်ခရီးသွားနေရသလိုပါပဲလား ... :)
အို....ချစ်သော ချဉ်ပေါင်ကို အခိုက်ဆုံးပဲဗျို့ :) အကို့ပိုစ်ဖတ်ပြီး ဒီနွေအိမ်ပြန်မယ့်အရေး အရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရှားနေမိပြီ၊၊ ချဉ်ပေါင်ကြော်ရယ် ပဲပြုတ်ရယ်ကို အလွမ်းဆုံးပဲ။
သားနှစ်ယောက်ရဲ့ မွေးရပ်မြေကို သူတို့ရဲ့ဖေဖေနဲ့ မေမေက
စွဲဆောင်မှုရှိအောင် မစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပြစ်တင်နေမိတယ်...။
ဒီပိုစ့်ထဲက ပုံတွေက ပိုကောင်းတယ်လို့ ခံစားနေရတယ်။
ဖတ်ရင်းနဲ့ အဲဒီလိုပုံ ထွက်အောင် ရိုက်ဖို့ ကိုယ်တိုင် တခါမှလည်း အချိန်မပေးမိတာကို တွေးမိနေတယ်၊
ဘလော့ဂ်ဂါတွေကို တချို့မြင်ဖူးတော့ ပြန်လည်ပြီး ပုံဖော်မိသေးတယ်၊
မခင်ဦးမေနဲ့ တွေ့ရတာကို ဖတ်မိလိုက်ချိန်မှာ အရမ်းစိတ်ဝင်စားသွားပြီး ဘယ်လိုလေးများ ပုံဖော်ထားလေမလဲလို့ ရှာပြီးဖတ်တော့ မတွေ့ရဘူး၊
စာပေဟောပြောပွဲ နောက်ကျတာတွေ၊ ထမင်းဗူးလေး စားရပုံတွေကို ကိုညီလင်းသစ်လိုပဲ ကျွန်မ တချိန်က ခံစားမိဖူးတာနဲ့ ထပ်တူပဲ၊
Perfect Compositions @ photos..
Esp.. 3,4 & 8
ကိုယ်တိုင် ရောက်သွားသလို ခံစားမိပါရဲ့။
မနေ့က ခရီးကပြန်ရောက်ခါစမှာ အိမ်ကတူမလေးတွေကပြောတယ် မောင်ညီလင်းရဲ့ ကျွန်းလေးရေမမြုပ်တော့ဘူးတဲ့း))ဒါကြောင့်ဒီည အပိုင်းဆက်လေးကို အေးအေးဆေးဆေး ၀င်ဖတ်ဖြစ်သွားတယ်... ကျွန်းလေးမှာ နေတဲ့သူအတော်များများတောင် ဒီလောက်အထိ နှံ့နှံ့စပ်စပ်သိမယ်မထင်ဘူး ဓာတ်ပုံတွေကလည်း ရိုက်ချက်တွေကောင်းပါ့။
ကျွန်းကလေးအကြောင်း သိကောင်းစရာအနေနဲ့ Book mark လုပ်သွားတယ်နော်။
Merlion ကြီးကို အောက်ကနေပင့်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးကို တော်တော်ကြိုက်တယ်...
ဓာတ်ပုံတွေအားလုံးကတော့ ဓာတ်ပုံဆရာရဲ့လက်စွမ်းအောက်မှ တောက်ပြောင်လှပလွန်းပါတယ် ကိုညီရေ...